3.17.2020: MCS COVID-19 अपडेट – मेसन सिटी स्कूलहरू COVID-१ Head मुख्यालय
3.17.2020: MCS COVID-19 अपडेट
तपाईको अनुग्रह र समर्थनका लागि धेरै धेरै धन्यबाद जुन हामी सबैले हाम्रो नयाँ COVID-19 वास्तविकता मार्फत काम गर्दछौं! हिजो दिउँसो २ बजे सम्म, त्यहाँ मेसन सिटी स्कूलहरूमा COVID-19 को कुनै पुष्टि घटनाहरू छैनन्, र 50 ओहायो मा पुष्टि मामलाहरु. तल हाम्रो परिवार र जनताबाट साझा प्रश्नहरू छन्, र हाम्रो प्रतिक्रियाहरू।
के हुन्छ यदि म मेरो बच्चाको लागि उपकरण लिन असमर्थ थिए?
यदि तपाईंको बच्चा अझै पनी एक उपकरणको पहुँच छैन, तपाईं जिल्लाबाट एक Chromebook bण लिन सक्नुहुन्छ. हाम्रो कुनै पनि स्कूलबाट एक Chromebook लिनुहोस् 4:00बेलुका 6:00आज बेलुका
कसरी विशेष शिक्षा विद्यार्थीहरूको आवश्यकतालाई विचार गरीरहेको छ?
व्यक्तिगत हस्तक्षेप विशेषज्ञहरु हाम्रो परिवारहरु लाई सिकाउन को अवसरहरु साझा गर्न को लागी पुग्दैछन्, र दूरस्थ शिक्षा वातावरणमा सम्भव भएसम्म सेवाहरू. हामी यसमा हस्तक्षेप संसाधनहरूको बैंक पनि सिर्जना गरिरहेका छौं MCS लर्निंग मोमेन्टम साइट.
स्नातक प्रभावित हुनेछ?
हामीलाई थाहा छ कि यो हाम्रो वरिष्ठहरूको लागि खण्डनको महत्त्वपूर्ण संस्कार हो, र हामी हाम्रो वर्गको साथ समानुभूति राख्छौं 2020 विद्यार्थीहरु (को समयमा जन्मेका 9/11) र तिनीहरूका परिवारहरू यी अनिश्चित समयहरूमा नेभिगेट गर्दा।
यहाँ हामीले ओहायो शिक्षा विभागबाट प्राप्त गरेका निर्देशनहरू छन्।
“ओहायो शिक्षा विभाग साझा गरेको छ कि सुनिश्चित कि कक्षा को 2020 स्नातक गर्न ट्र्याक मा छ एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो. स्कूलहरूले प्रत्येक वरिष्ठको स्थिति समीक्षा गर्न यस अवसर लिनुपर्दछ जुन विद्यार्थीले कक्षाको कक्षाको लागि स्नातक आवश्यकताहरू पूरा गरेको छ भनेर निर्धारण गर्न 2020. को कक्षा को लागी स्नातक आवश्यकताहरु मा महत्वपूर्ण लचकता छ 2020. यो महत्त्वपूर्ण छ कि स्कूलहरूले आफ्ना प्रत्येक विद्यार्थीको आवश्यकताहरू बुझ्नु पर्छ र आवश्यक पर्दछ, सम्भव भएसम्म, प्रत्येक विद्यार्थीलाई स्कूल वर्षको बाँकी समयमा यी आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्ने योजना, दुबै अवधि बन्द समयमा (व्यावहारिक रूपमा) र यस्तो समयमा स्कूल पुनः सुरु हुन सक्छ. वर्तमान अवस्था परिवर्तन हुनु पर्छ, शिक्षा विभागले थप जानकारी प्रदान गर्दछ. हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको विद्यार्थीहरूको लागि सही कुरा गर्ने चासोमा उचित लचिलोपन प्रदान गर्ने हो।”
यदि तपाइँसँग तपाइँको विद्यार्थीको बारेमा विशिष्ट प्रश्नहरू छन्, कृपया तपाइँको बच्चाको सल्लाहकारलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
एपी परीक्षणको बारेमा के?
कलेज बोर्डले एपी परीक्षा तालिका परिवर्तन गर्न विचार गर्दैछ. अधिक सिक्ने क्रममा हामी जे जान्दछौ साझा गर्दछौं.
के त्यहाँ समय छ यदि मेरो बच्चाको औषधी उठाउन मलाई आवश्यक छ भने??
यदि तपाइँ स्कूलबाट तपाइँको बच्चाहरुको औषधि लिनु पर्छ, कृपया तपाईंको स्कूल नर्सलाई सकेसम्म चाँडो ईमेल गर्नुहोस्. सबै औषधी शुक्रबार दिउँसो लिनु पर्छ, मार्च 20, 2020.
MECC – प्याटी ग्यास्ट ([email protected])
ME – जेनिफर डेभिस ([email protected])
ME – क्याथी हेगर ([email protected])
MMS – स्टेफनी हचिसन ([email protected])
MHS – क्याथी म्याकवे ([email protected])
चुनावको साथ के भइरहेको छ?
मार्च 17 कोरोनाभाइरस द्वारा राखिएको स्वास्थ्य आपतकालको कारण सोमबार राती चुनावलाई बुलाइएको थियो. हालसम्म प्रयोग गरिएका सबै मतहरू गणना हुनेछन्. तपाईं अब अनुपस्थित मतदान गर्न सक्नुहुन्छ. अनुपस्थित मतपत्र अनुरोध गर्नुहोस्, र यसलाई मेल गर्नुहोस् 520 न्यायमूर्ति डा।, लेबनान, OH 45036।
यस समयमा आमा बुबा र समुदायले एक अर्कालाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ?
आफ्नो ख्याल गर्नु! हेर्नबाट विश्राम लिनुहोस्, पढ्दै, वा समाचार कथाहरू सुन्दै, सामाजिक मिडिया सहित. गहिरो सास लिनुहोस्, तन्नु, वा ध्यान गर्नुहोस्. स्वस्थ खाने कोसिस गर्नुहोस्, राम्रो सन्तुलित भोजन, नियमित व्यायाम गर्नुहोस्, धेरै निद्रा पाउनुहोस्, र रक्सी र लागूऔषधको जोगिनुहोस्. तपाईका चिन्ताहरूका बारे विश्वासिला व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्नुहोस् र तपाईले कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ.
बच्चाको हेरचाह र काम गर्ने अभिभावकहरूको लागि कभरेज चुनौती हुनेछ. यदि तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ, अन्य व्यक्तिको बच्चा हेर्न प्रस्ताव (राम्रो सामाजिक दूरी अभ्यास गर्दा).
एक अर्कालाई हेर्नुहोस्
हाम्रो समुदायका केहि सदस्यहरू COVID-19 लाई बढी जोखिममा छन्, समाप्त भएका व्यक्तिहरू सहित 60, वा पहिले अवस्थित चिकित्सा अवस्था छ. किराना पसलमा प्रस्ताव गरेर हाम्रा प्रियजनहरू र छिमेकीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस् र अन्य आवश्यक सहयोगको रूपमा प्रदान गर्नुहोस्.
तपाईको समर्थनका लागि धन्यबाद. St. पैट्रिकको दिन र हरेक दिन हामी बाँच्नको लागि भाग्यशाली महसुस गर्दछौं, सिक्नुहोस् र मेसन मा सेवा.